Fampahalalam-baovao faha-138 -
Accueil > Newsletter > Fampahalalam-baovao faha-138
HAFATRA AVY ANY AMIN’NY DISTRIKAN’I TOLIARA MOMBA NY TETIKASA BASE TOLIARA : lahatsoratra sy horonam-peo
1/ Lahatsoratra nivoaka androany voalohan’ny volana Aprily 2020
Fitrandrahana fasimainty : « mandika lalàna ny Base Toliara » hoy ny fikambanana miaro ny zon’olombelona »
Miakatra ny feo any Toliara I sy Toliara II. “Mandika lalàna ny orinasa Base Toliara, mpitrandraka fasimainty ao Ranobe”, hoy ny mpamboly sy ny mpiandriaka any an-toerana. “Araka ny didim-panjakana nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra tamin’ny 06 novambra 2019, dia mihantona ny asa rehetra ataon’ny orinasa Base Toliara, hatramin’ny fahazoany manao serasera. Ny volana febroary 2020 teo anefa, dia namoaka filazana fitadiavana mpiasa ny orinasa. Tsy mbola misy anefa ny didim-panjakana manafoana ny fampihatoana ny asany sy ny fahafahany manao serasera”, hoy Atoa Zazah, filohan’ny fikambanan’ny tantsaha mpiaro ny Zon’olombelona sy ny Tontolo iainana ao amin’ny fokontany Benetse, kaominina Ankilimalinike, Distrika Toliara II
2/ Horonam-peo voaray ny faha-13 marsa 2020 :
Manohy sy manamafy atrany ny fanoherana ny fotodrafitrasa izay ho ataony Base Toliara - YouTube